Ndị minista na-ahụ maka njem nlegharị anya ga-ekwu okwu na ụbọchị njem nlegharị anya Africa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Ndị minista na-ahụ maka njem nlegharị anya ga-ekwu okwu na ụbọchị njem nlegharị anya Africa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya Jamaica Honorable Edmund Bartlett ga-eso na ndị ozi njem nlegharị anya ise ga-ekwu okwu n'oge emume ahụ dọtara ndị isi mmadụ ịkọrọ ahụmịhe ha na echiche ha na njem nlegharị anya Africa n'oge na mgbe ọrịa COVID-19 gasịrị.
Mịnịsta ise a ma ama na njem nlegharị anya ga-esonye, ​​na-ekwu wee mara mma ụbọchị nke abụọ nke Africa Tourism Day nke akwadoro ime ma emechaa na Legọs, isi obodo azụmahịa nke Naijiria n'etiti ụtụtụ Fraịde a.
Mbipụta nke abụọ nke ụbọchị njem nlegharị anya Africa (ATD) ga-ewere ọnọdụ n'isi obodo azụmahịa nke Nigeria site na Nọvemba 25 ruo Nọvemba 26, 2021.
eTurboNews ga-ebi ndụ ụbọchị njem nlegharị anya Africa, ndị na-agụ akwụkwọ nwere ike ịga na Zoom.
Ihe omume a na mmekorita ya na Ndị njem nlegharị anya nke Africa na Network Njem Nleta Ụwa
Onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya Jamaica Dr. Edmund Bartlett
Ndị ozi ndị ọzọ ga-esonye na mmemme a bụ Moses Vilakati, onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya na ihe gbasara gburugburu ebe obibi nke ala eze Eswatini, Hon Phildah Nani Kereng, onye Botswana maka gburugburu ebe obibi, akụ sitere n'okike, nchekwa na njem nlegharị anya.
Ndị ọzọ bụ Dr. Memunatu Pratt, onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya na omenala Sierra Leone na Dr. Damas Ndumbaro, onye minista na-ahụ maka akụ na ụba na njem nlegharị anya Tanzania.
Onye bụbu Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya na omenala nke Republic of Seychelles na Onye isi ala Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB) Hon. Alain St. Ånge bụ onye ọzọ a ma ama na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya Africa isonye wee kwuo okwu na mmemme ụbọchị njem nlegharị anya Africa.
Onye isi oche nke African Tourism Board (ATB) Hon. Alain St. Ange
Ndị njem nlegharị anya nke Africa Onye isi oche onye isi Mr. Cuthbert Ncube ka edobere nke ọma ka a kparịta ụka wee kesaa okwu ndị dị mkpa gbasara njem nlegharị anya na ihe nketa Africa bara ụba n'oge mmemme ATD.
Onye isi oche ndị isi oche ndị njem nlegharị anya Afrịka Mr. Cuthbert Ncube
Ihe omume ATD dọtakwara ndị na-eme njem nlegharị anya n'ofe mpaghara Africa, United States of America, Europe na mba ndị ọzọ n'ụwa iji kparịta, kesaa echiche dị mma ma gbanwee ahụmịhe ha bara ụba na ụzọ kacha mma ga-enyere aka ịzụlite mgbe ahụ ịzụ ahịa njem nlegharị anya Africa. na Africa n'ozuzu ya n'ahịa ndị njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ.
N'inwe isiokwu nke "Nkwukọrịta nke njem nlegharị anya, ahia na nkwado, ihe dị mkpa maka Africa, N'oge na Post COVID-19 Era", mmemme ụbọchị njem nlegharị anya nke abụọ nke Africa ga-egosipụta ihe nketa na ọrụ bara ụba enyere na mpaghara njem nlegharị anya Africa.
Kọmitii International Organisation (IOC) ekwupụtala nnabata nke ụbọchị njem nlegharị anya Africa nke abụọ, bụ nke a na-akwụ ụgwọ ka ejidere ya.
Ụbọchị njem nlegharị anya Africa bụ nke a raara nye ilekwasị anya na kọntinent Africa dị ka mmemme kọntinent, nke na-achịkọta gọọmentị, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ndị na-ahụ maka ya na ndị ọzọ na uru njem nlegharị anya iji dozie nsogbu ndị metụtara ngalaba ahụ.
Emebere ATD wee weta ndị isi njem nlegharị anya gụnyere ndị na-eme iwu obodo, ndị na-azụmaahịa, ndị ọbịa na ndị egwuregwu njem ndị ọzọ na-eme mmemme maka ịba ọgaranya Africa, Oriakụ Abigail Adesina Olagbaye nke ụlọ ọrụ Desigo Tourism Development and Facility Management kwuru.
ATD ebumnobi, n'etiti ndị ọzọ, na-eme ememe na showcase Africa na zuru ụwa ọnụ ogbo, eclectic ike nke iche iche omenala na njem nlegharị anya akụ, ihe nketa na potentials na niile kachasi mkpa nke pụtara, ịma mma na agwa, kwuru Nwada Abigail.
Ihe omume a ga-emekwa ka ndị Africa nọ na mba ọzọ na mba Africa ndị ọzọ, ndị enyi Africa ọnụ iji ghọta uru ụlọ ọrụ na-atụnye ụtụ dị ukwuu na mmepe akụ na ụba na nke na-emepụta ọrụ, na-emepụta ego na imeziwanye ndụ na obodo n'ofe kọntinent ahụ.
ATD ga-ebulikwa ma lekwasị anya n'ime mpaghara njem nlegharị anya Africa wee weta n'ihu, ihe ịma aka na okwu na-egbochi uto na mmepe njem nlegharị anya.
Ọ ga-esetịpụ ihe ngwọta maka uto, ọganihu na ọganihu n'ọdịnihu nke ngalaba njem nlegharị anya, karịsịa na-akwalite nkwado na ichekwa ya.
Ụbọchị a ga-akpali ọgbọ na-abịa n'ọgbọ n'ọmụma na ekele nke omenala Africa na ihe nketa okike, na-ekepụta na ịkwado njikọ na "Africa maka ndị Africa" ​​na ndị enyi nke Africa nke nwere ike gbanwee atụmanya njem nlegharị anya nke kọntinent ahụ ka ọ bụrụ ohere azụmahịa na itinye ego.
Ndị sonyere na ụbọchị njem nlegharị anya Africa ga-abụ akụkụ nke akụkọ ntolite wee hụ mbipụta ọzọ na-akpali akpali nke mmemme mbinye aka n'Africa nke na-ewepụta ụbọchị kọntinent maka icheta njem nlegharị anya kwa afọ na nnukwu onyinye ọ na-enye akụ na ụba Africa.
Ụbọchị ahụ ga-ewepụtakwa ụzọ maka mmepe njem na mmepe maka kọntinent Africa, wee chịkọta azụmahịa, ntinye ego, ohere ịkparịta ụka n'Ịntanet na ndị nwere oke n'ime na n'èzí ụlọ ọrụ ahụ.
Ndị sonyere na mmemme ahụ, ga-enwetakwa ihe ọmụma na omume dị mkpa iji mee ka ọ na-emetụta njem nlegharị anya, ahia, nkwado na mgbanwe ihu igwe.
Ọtụtụ mmemme ga-eme emume ụbọchị njem nlegharị anya Africa nke a na-atụ anya na ọ ga-agafe na mba Africa dị iche iche site na mgbasa ozi nke ọma.
Emebere ụbọchị njem nlegharị anya Africa na 2020 (afọ gara aga) yana nsonye sitere na mba 79 na ndị na-ekwu okwu 21 sitere na mba iri na otu.
Pịa ebe a ka isonye na ọgbakọ mbugharị